Wararka - Ururka Birta iyo Biraha ee Shiinaha: Isku hagaaji qaab dhismeedka badeecadaha la dhoofiyo iyo in la sifeeyo soo dejinta iyo dhoofinta canshuuraha alaabada birta ah ee waddankayga
Si loo siiyo ciyaar ka fiican ujeedka loogu adeegayo warshadaha birta iyo shirkadaha xubnaha ka ah guddiga ka shaqeeya xirfadleyda Ururka, iyo in laga caawiyo isbeddelka warshadaha iyo kor u qaadista iyo horumarinta tayada sare leh, 19-ka Maajo, Suuqa Shiinaha ee Shirkadda Birta iyo Birta. iyo shirkii isuduwaha soo dejinta iyo dhoofinta ee xubinta afraad waxaa lagu qabtay magaalada Shanghai.
Hoggaamiyeyaasha ay khusayso ee ka socda Xafiiska Daaweynta Ganacsiga ee Wasaaradda Ganacsiga ayaa ka soo qayb galay kulanka. Shirkadaha wax soo saarka birta iyo birta sida Baowu, Anshan Iron iyo steel, Shagang, Shougang, Hegang, Benxi Iron and steel, Baotou Iron and steel, Japan Steel, Yonggang iyo shirkadaha kale ee wax soo saarka birta iyo birta ayaa mas'uul ka ahaa soo dejinta iyo dhoofinta suuqyada iyo bir gaar ah iyo ururada kale ee warshadaha. In kabadan 70 wakiilana ayaa kaqeybgalay kulanka.
Maamulaha guud ee Baosteel Sheng Genghong ayaa jeediyay khudbad soo dhaweyn ah. Wuxuu tilmaamay in dunida maanta ay ka socdaan isbadalo waa weyn oo aan la arkin qarniga. Warshadaha biraha waxay leeyihiin fursado iyo caqabado labadaba. Waa waajibka warshadaha birta ah inay fahmaan marxaladda cusub ee horumarinta, hirgelinta fikradaha cusub ee horumarinta, dhisida qaab cusub oo horumarineed, iyo inay ilaaliso howlaha hufan ee silsiladda warshadaha.
Kulanku wuxuu u codeeyay oo loo ansixiyay "Shuruucda Shaqeynta ee Suuqa Ururka Birta iyo Birta ee Shiinaha iyo Guddiga Isuduwaha Soo Dejinta iyo Dhoofinta", waxaana la doortay xubnaha kal-fadhiga afaraad ee Guddiga Isuduwaha Suuqa iyo Soo Dejinta iyo Dhoofinta, oo ay ku jiraan guddoomiyaha, agaasime ku-xigeennada, iyo xoghayaha fulinta. . Sheng Genghong, maareeyaha guud ee shirkadda Baosteel Co., Ltd. ee shirkadda Baowu, ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha guddiga isku xirka suuqa iyo soo dejinta iyo dhoofinta.
Sheng Genghong wuxuu sameeyay warbixin shaqo isagoo ka wakiil ah guddiga, wuxuu dib u eegay oo soo koobay shaqadii ugu weyneyd iyo waxyaabihii u qabsoomay gudigii hore, wuxuuna lafa guray xaalada hada jirta iyo dhibaatooyinka jira ee suuqa birta iyo soo dejinta. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in guddiga shaqadu ay tahay inay si buuxda u siiyaan doorka shirkadaha xubnaha ka ah tallaabada xigta, ay xoojiyaan is-weydaarsiga iyo wadaagista macluumaadka warshadaha ee dhammaystiran sida siyaasadaha warshadaha iyo isbeddellada, kor u qaadista awoodda u adeegidda xubnaha, iyo inay waqtigeeda ka tarjumaan dalabaadka shirkadaha xubnaha ka ah; waxay ka caawinaysaa shirkadaha xubnaha ka ah inay hagaajiyaan qaab dhismeedka wax soo saarka dhoofinta iyo xoojinta suuqa. Tartan; Bixinta taageero shirkadaha xubin ka ah si loo hagaajiyo qaabka ganacsiga shisheeye loona hagaajiyo istaraatiijiyadaha suuqgeynta waqtigii loogu talagalay; in si firfircoon looga jawaabo hindisaha "Belt iyo Wadada" oo si wanaagsan looga faa'iideysto fursadda saxiixa iyo gelitaanka xoogga "Heshiiska RCEP" si joogto ah loogu horumariyo suuqyada soo koraya; si wada jir ah loo ilaaliyo Nidaam suuqeed caafimaad leh oo nidaamsan iyo danaha shirkadaha xubnaha ka ah.
Luo Tiejun, gudoomiye ku xigeenka Ururka Birta iyo Birta ayaa ka soo qayb galay kulanka. Khudbadiisa, wuxuu ugu hambalyeeyay agaasimayaasha cusub ee la doortay, agaasime ku xigeenada iyo xoghayaha fulinta ee guddiga shaqada, wuxuuna cadeeyay guulaha ay gaareen shaqada guddiga. Wuxuu tilmaamay in gudiyada xirfadleydu ay gacan ka geysan karaan xirida xiriirka ka dhexeeya shirkadaha iyo ururada, isla markaana ka caawin kara sidii loo ogaan lahaa loona xallin lahaa dhibaatooyinka ay tabanayaan shirkadaha waqtigooda. Waxay ka kooban tahay mabaadi'da aasaasiga ah ee ku tiirsanaanta shirkadaha, ku tiirsanaanta xubnaha, iyo shirkadaha si ay u maamusho ururo. Waa adeegga ugu wanaagsan ee ay xubnuhu u qabtaan xubnaha, Warshadaha adeegga, doorka muhiimka ah ee ururku u leeyahay inuu noqdo buundo iyo isku xirka dowladda iyo xubnaheeda si ka wanaagsan ayaa loo soo bandhigi karaa.
Luo Tiejun wuxuu carabka ku adkeeyay in iyadoo la balaarinayo cabirka wax soo saarka birta iyo mugga ganacsiga, culeysyada kheyraadka iyo culeyska deegaanka ayaa noqday mid aad iyo aad u daran si loo sameeyo caqabado la taaban karo oo ku saabsan horumarinta mustaqbalka mustaqbalka Shiinaha, waxayna saameyn qoto dheer ku leeyihiin tirada, noocyada iyo qaab dhismeedka birta la soo dejiyo. iyo dhoofinta. saamayn. Iyagoo wajahaya xaalada cusub iyadoo sii kordheysa baahida suuqa, culeysyada kheyraadka iyo deegaanka, iyo shuruudaha loogu talagalay horumarinta cagaaran, howsha guddiga waxay haysaa wado dheer oo u harsan waxaana ka buuxa caqabado cusub. Tallaabada xigta ee guddiga shaqada, wuxuu soo bandhigay shuruudo gaar ah: marka hore, shirkadaha waaweyn waa inay door hoggaamineed qaataan, qaadaan tallaabooyin firfircoon, oo si hufan u ciyaaraan doorka guddiga; tan labaad, in la xoojiyo is-edbinta, lana waafajiyo sharciyada iyo qawaaniinta lagu horumarinayo xasiloonida suuqa iyo caafimaadka; saddexaad, qorsheynta guud. Fulinta kala soocidda walxaha canshuuraha iyo dhiirrigelinta dhoofinta badeecadaha qiimaha sare leh; tan afraad, fiiro gaar ah u yeelo horumarka EU-da "habka hagaajinta soohdinta kaarboon" ee EU, oo daraasad ku samee saameynta canshuuraha canshuuraha goor hore; shanaad, xakamee xiriirka ka dhexeeya daaweynta ganacsiga iyo hagaajinta tartanka shirkadaha, iyo kor u qaadista ganacsiga shisheeye ee birta ah ee tayada sare leh.
Kulankii khaaska ahaa ee xigay, Kuxigeenka Wakiilka Lu Jiang ee Xafiiska Daaweynta Ganacsiga ee Wasaaradda Ganacsiga, Hu Wei, oo ah baare heerka labaad ah ee Waaxda Caalamiga ah ee Wasaaradda Ganacsiga, iyo Jiang Li, oo ah falanqeeyaha sare ee Birta iyo Birta Association, siday u kala horreeyaan waxay ka wada hadleen xaaladda guud iyo talooyinka shaqada ee wajahaya shaqada waddankeyga ee daaweynta, iyo RCEP Waxay soo bandhigtay oo ay falanqeeyeen fursadaha cusub ee warshadaha birta Shiinaha, aragtida suuqa biraha adduunka, iyo saameynta ay ku leedahay Shiinaha soo dejinta iyo dhoofinta birta.
Dood cilmiyeedka oo la qabtay galabnimadii, ka qeybgalayaashu waxay ka wada hadleen oo ay isku weydaarsadeen aragtiyo ku saabsan saameynta iyo ka jawaabista baabi'inta siyaasadaha dib-u-dhimista canshuuraha dhoofinta, xaaladda dhoofinta birta iyo rajada suuqyada dibedda, iyo waayo-aragnimada iyo soo-jeedinta ku aaddan wax ka qabashada khilaafaadka ganacsiga. Ka qeybgalayaashu waxay isku raaceen in kala soocida walxaha canshuuraha ay tahay shaqo muhiim ah oo meel fog gaadhay. Waa lagama maarmaan in si buuxda loo eego xaaladda dhoofinta ee alaabada biraha-dhamaadka sare leh, la isbarbar dhigo goobaha canshuuraha ee alaabada birta ah ee dalalka horumaray, oo si nidaamsan loo soo jeediyo in lagu sifeeyo waddankayga iyadoo lagu saleynayo sifooyinka jirka iyo kiimikada alaabooyinka. Qorshaha soo dejinta iyo dhoofinta canshuuraha birta iyo birta, iyadoo taa laga duulayo, waxaa talo loo soo jeedinayaa waaxyaha dowladda ee ay khuseyso. Kaqeybgalayaashu waxay sidoo kale soo bandhigeen rajo iyo talooyin ku saabsan shaqada mustaqbalka ee guddiga iyo ururka.